China Acryli LED neon oghe oghe na pane-MYI002 Manufacture and Factory | Meiyi
N'èzí Omenala 12V LED Flex Acryli Neon Sign-20LPS001
Emeputa ahaziri ikanam ìhè iko neon si ...
High ihie Open Vivid Omenala Acryli ikanam Neon S ...
Omenala acryli ada neon Flex warara 12V logo ịrịba ama lig ...
Acryli LED neon oghe oghe na pane-MYI002
Ebe Mmalite: China Brand aha: Meiyi
Nọmba nlereanya: MYI .2 ihe: Ikanam neon emeghe akara
Na-egbu maramara mode: Static; flash Ihe: Acryli, ABS
size: 21.3 ”* 9.8” * 1.5 ” Agba bọlbụ: acha ọbara ọbara, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọcha, odo, acha anụnụ anụnụ
Oge ndụ: Afọ atọ voltaji: 12V
Oge: Lọ ahịa kọfị, ahịa, Ogwe, ụlọ ahịa ọ bụla Ngwaahia: Nabata
Factory Direct: Eeh Akwụkwọ: UL / CE / GS / SAA / BS
Nkwakọ ngwaahịa nkọwa: Kpuchie na afụ Kechie na ụfụfụ n'ime, na juru n'ọnụ na katọn n'èzí. Ọzọkwa nwekwara ike juru n'ọnụ kwa dị ka gị chọrọ.
1. Anyị àjà ihe ọ brightụ brightụ na-enwu gbaa na-egosipụta na ndị mara mma edo, simulating neon ọkụ niile uru nke Ikanam ọkụ.
2. Ngwa zuru ezu: Gụnyere ike ọkọnọ; ngwaike nghọta (2 “S” nko, 2 yinye n’agbụ); na ime akara (ON, Gbanyụọ, na-egbu maramara mode).
3. Anyị na-enye ndị ahịa akwụkwọ ikike dị afọ 1.
4. Easy iji wụnye: Ọ dịghị mgbagwoju anya melite ma ọ bụ echichi. Naanị tinye ihe nkedo ahụ, kwụnye ụdọ ike, pịa igodo ike. Enweghị batrị mkpa. Emere ihe ịrịba ama a maka ime ụlọ naanị.
5. Ọ bụghị ihe ịrịba ama neon: Ihe ngosi eletrọniki anyị anaghị eji ọkụ neon eme ihe. 100% LED technology pụtara ìhè karịa maka obere ike, ogologo ndụ na obere ndozi, na obere nsogbu na gburugburu ebe obibi ma e jiri ya tụnyere neon emeghe ihe ịrịba ama.
6. Pụrụ iche ikpe na elu-ọgwụgwụ azụmahịa klọb, hotels, hotels, obodo
Ihe ngosi neon mepere emepe bara ezigbo uru, na-enyere aka ịdọrọ uche ndị mmadụ. Ọ dị mma maka iji ya na ebe ọha na eze ogologo oge.
Ikanam ihie: 20000-25000MCD
Ike oriri: 24W
Voltaji: Ntinye: 100-240V ~ 50 / 60HZ Mmepụta: 12V 2A
Remote iche: 98 'na poolu elu, 20' na poolu ala
ANYA NA-EGO: AGPTEK Neon Open Signs na-egbuke egbuke ma na-egbu maramara. Oghere oghe oghe ga-adọta uche nke ndị na-agafe agafe! Mee ka ndị asọmpi gị jiri bọọdụ a na-enwu gbaa wee nweta ndị ahịa ọhụrụ na ndị na-alọghachi na-agbago azụmaahịa gị.
LỌ NKE AB TWOỌ: Ogwe akara ngosi nwere ọkụ ma ọ bụ nke kwụ ọtọ iji gboo mkpa dị iche iche. Gbanwee n'etiti ụdị abụọ dị iche iche, nke na-agbanwe agbanwe ma ọ bụ na-egbu maramara, iji dọta ụdị ndị ahịa niile, n'ehihie ma ọ bụ n'abalị.
Njikere ike: efficiencyrụ ọrụ ike ma chekwaa ụgwọ gị! Ọ dị mma karịa ngwaahịa neon yiri nke ahụ n'ihi ọnụego oriri ike.
Mfe iji: abịa na a igwe anaghị agba nchara nghọta yinye. naanị gbanye ma gbanye mgba ọkụ ahụ, mee ka windo ụlọ ahịa gị dị elu ozugbo na akara ọhụụ ọhụụ gị. Ime ụlọ naanị.
NKWUKW &KW &KW WARKW WARR WAR: ANAKWETA: Akara oghe n'èzí dị mma maka windo iko, mgbidi, ngosi ngosi, ụlọ ahịa, ebe a na-ere mmanya, Ogwe mmanya, Hotellọ oriri na ọ…ụ…ụ… Kedu 'ọzọ, anyị na-enye Akwụkwọ ikike Afọ 2.
Nke gara aga: Acryli LED neon oghe oghe na ellipse -MYI003
Osote: Acrylic LED neon oghe oghe na ihuenyo na-agagharị-MYI007
Ouvert oghe akara uhie na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ-MY ...
Abierto emeghe akara uhie na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ-M ...
Acryli LED neon oghe oghe na ellipse -MYI003
Acryli LED neon oghe oghe na arc na busines ...
Acryli LED neon oghe oghe na arc-MYI001
Acryli LED neon oghe oghe na ịpịgharị scree ...